Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya oo soo dhoweeyay Guushii Qaranka 17-jirrada | Ciyaaro Online
Home - CIYAARAHA SOMALIDA - Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya oo soo dhoweeyay Guushii Qaranka 17-jirrada
Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya oo soo dhoweeyay Guushii Qaranka 17-jirrada
Guddoomiyaha XIriirka kubadda Cagta Soomaaliya ahna xubin sare oo ka tirsan Xiriirka CECAFA ayaa soo dhoweeyay Guushii ay xulkeenna Qaranka ee 17-jirrada ah ka gaareen tartanka CECAFA UN17 oo ka socda dalka Burundi.
Cabdiqani Siciid Carab, Madaxweynaha Xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa sheegay in ay Guusha dhallinyaradaas horumar weyn ku hoggaamin doonto ciyaartoyda Soomaaliyeed ee tartamada ka qeyb gelaya.
Xulka kubadda Cagta Soomaaliya ee 17-jirrada ah ayaa waxay kusoo Baxeen kaalinta Koobaad ee Group A tartanka CECAFA, waxayna 3dii ciyaarood ee ay dheeleen kusoo baxeen 1-0, guul ah oo ay ka gaareen Kenya, 3-0 dhibco si sharci ah looga qaaday Itoobiya iyo Garabdhac 0-0 ah oo ay la galeen dhiggooda Burundi.
Hadda xiddigaha Xulka Qaranka ayaa waxay joogaan Semi-finalka koobka CECAFA UN17, Waxayna ku aadi karaan, midkood xulalka, Uganda,Tanzania iyo Sudan.
Cabdiqani Siciid Carab ayaa sheegay in Soomaaliya ay guul weyn oo usoo hoyatay tahay in xiddigaha da’da yar ee Qaranku ay gaaraan heerka intaas la eg.
“Wiilashani waxay tababar soo wadeen muddo 2 sanadood ah oo ay kasoo qeyb qaateen horyaalka dhalinyarada ee sanadkiiba mar la qabto, waxaana ku kalsoonaa in ay bandhig wanaagsan sameynayaan sidaba dhacday”ayuu yiri guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubada Cagta Cabdiqani Saciid Carab.
Guddoomiye Carab ayaa hadalkiisa sii raaciyay ” Waxaan fursadan uga faa’ideysanayaa in aad amaan usoo jeediyo FIFA oo nagu gacan siisay in aan guushan gaarno, sababtoo ah Soomaaliya heerkan waxay kusoo gaartay garab istaaga FIFA oo maalgelisay horyaalka kubada cagta ee dhalinyarada iyo barnaamijyada kale ee xaga horumarinta ah ee dalka ka socda”.
“FIFA waxay maalgelisay horyaalka dhalinyarada oo aan markii ugu horesay bilownay 2016-kii kaasoo lagu bilaabay 12 kooxood, kaddibna aan balaarinay oo ka dhignay 14 kooxood. Sanadka dambe waxaa noo qorsheysan in lasii balaariyo horyaalka dhalinyarada. Waxaan aad ugu faraxsanahay in horumarka aan sameyneyno uu soo jiitay FIFA iyadoo wadamada qaar aysan wali helin barnaamijkan Soomaaliyana sanadkii sadexaad oo xiriir ah lagu abaal mariyay”ayuu yiri guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubada Cagta Cabdiqani Saciid Carab.